Izinto eziphambili zoSetyenziso oluSebenzayo lweSicelo sokuTyhala | Martech Zone
Lahamba ixesha apho ukuvelisa umxholo omkhulu kwakwanele. Amaqela okuhlela ngoku kufuneka acinge ngokuhanjiswa kwawo ngokukuko, kwaye ukubandakanyeka kwabaphulaphuli kwenza izihloko.
Inkqubo yemidiya ingafumana njani (kwaye igcine) abasebenzisi bayo ababandakanyekayo? Ndingenza njani akho I-metric ithelekiswa nomndilili wecandelo? U-Pushwoosh uhlalutye amaphulo esaziso sokutyhala eendaba ezisebenzayo eziyi-104 kwaye ukulungele ukukunika iimpendulo.
Zeziphi ezona zixhobo zeMedia zibandakanya?
Ukusuka kwinto esiyiqapheleyo kwi-Pushwoosh, tyhala izaziso zemetrikhi zinegalelo elikhulu kwimpumelelo ye-media app kukuzibandakanya komsebenzisi. Kutshanje Isaziso sophando lweebhentshi zesaziso Utyhile:
Umyinge izinga lokucofa (CTRyeeapps zemidiya yi-4.43% kwi-iOS kunye ne-5.08% kwi-Android
Umyinge izinga lokungena yi-43.89% kwi-iOS kunye ne-70.91% kwi-Android
Umyinge Ukuphindaphindeka kwemiyalezo yokutyhala Utyhala kathathu ngemini.
Sikwatsho ukuba, ubuninzi, iiapps zemidiya ziyakwazi ukufumana:
12.5X ephezulu cofa amaxabiso kwi-iOS nakwi-13.5X ye-CTRs eziphezulu kwi-Android;
1.7X ephezulu amazinga okungena kwi-iOS kunye ne-1.25X ephezulu yokungena kwi-Android.
Into enomdla kukuba, ii -apps zosasazo ezinezona metric zibalaseleyo zokubandakanya umsebenzisi zinama-push push frequency afanayo: bathumela ama-3 atyhala yonke imihla, njengomndilili.
Izinto ezi-8 eziPhembelela ukuSebenza koSebenziso loSetyenziso
Ii -apps zemidiya eziphambili zikhokelela njani ekufakeleni abafundi bazo ukuba ngempumelelo? Nazi iindlela kunye nemigaqo eqinisekisiweyo kufundo lwePushwoosh.
Inyaniso 1: Isantya seendaba esiThunyelwe kwiSaziso sePush
Ufuna ukuba ngowokuqala ukwaphula iindaba-oku kuyacaca, kodwa uqinisekisa njani?
Sebenzisa isantya esiphezulu Isaziso sokutyhala Itekhnoloji yokuhambisa iindaba ngo-100X ngokukhawuleza kunomndilili
Ukusuka kumava ethu, xa ii -apps zemidiya zikhawulezisa ukuhanjiswa kwesaziso sazo, zabo I-CTRs inokufikelela kwi-12%. Oku ubuncinci iphindwe kabini umndilili esiwutyhilileyo kufundo lwethu lwedatha.
Cacisa i inkqubo yokuhlela Ngokuthumela izaziso zoTsalo
Qiniseka ukuba ukukhuthaza umxholo ngokutyhala kuyakhawuleza kwaye kulula nabani na kwiqela lakho losetyenziso lweendaba. Khetha isoftware yokwazisa evumela ukuhambisa iindaba kunye nokufunda ixesha elide ngaphakathi komzuzu-ngaphandle kokwazi ukuba unekhowudi Ngexesha lonyaka, inokukugcinela iintsuku ezisixhenxe zokusebenza ngokupheleleyo!
Inyaniso yesi-2: Ukukhethwa kokuNgena ngaphakathi kwiZaziso zoPhulo
Nali iqhinga elilula: buza kubaphulaphuli bakho eziphi izihloko bangathanda ukwaziswa malunga endaweni yokubuza ukuba bayafuna na ukufumana ikhona izaziso kukonke.
Kwindawo, oku kuyakuqinisekisa inqanaba eliphezulu lokungena kwi-app yakho. Okulandelayo, oku kuyakuvumela ukwahlulwahlulwa okungaphezulu kunye nokujolisa ngqo. Awuzukuzibuza ukuba umxholo owukhuthazayo ulungile- abafundi baya kufumana kuphela umxholo abazinikele kuwo ngokuzithandela! Ngenxa yoko, ukubandakanyeka kwakho kunye nokugcina iimetrikhi kuya kukhula.
Apha ngezantsi kukho imizekelo emibini eqhelekileyo yokubhaliselwa okukhawulezileyo kuboniswe kwi-CNN Breaking US kunye ne-World News app (ekhohlo) kunye ne-USA Today app (ngasekunene).
Lumka, nangona: ngelixa ufuna ukukhula a yahlulwe kakuhle Isiseko sabasebenzisi abakhethiweyo, awunakufuna ukwandisa uluhlu lwababhalisi bakho besaziso sokutyhala ngazo zonke iindlela.
Isifundo sedatha sePushwoosh sibonisile ukuba inqanaba lokungena elingenisiqinisekiso sokuzibandakanya okuphezulu komsebenzisi kunxibelelwano lwakho.
Ukuthatha? Ukwahlulahlula yinto ephambili, ke makhe sihlale kuyo.
Inqaku 3: Ukwahlulahlula iSahlukanisi soMsebenzisi
Ukwandisa ukubandakanyeka kwabaphulaphuli, ii -apps eziphambili zemithombo yeendaba zijolise kwizaziso zabo ngokweempawu zomsebenzisi (ubudala, ilizwe), ukhetho lokubhaliselwa, ukusetyenziswa komxholo odlulileyo, kunye nokuziphatha kwexesha lokwenyani.
Kumava ethu, nantsi indlela abanye abapapashi abazikhule ngayo ii-CTRs zabo ngama-40% nkqu nakuma-50%.
Inyaniso 4: Isaziso sokutyhala sokwenza ubuNtu
Ukwahlulahlula kunceda nina yamkela umdla wokufunda kwakho. Ukwenza umntu, okwangoku, kuyanceda abaphulaphuli bakho yamkela usetyenziso lwakho lweendaba phakathi kwabo bonke abanye.
Yenza ngokwezifiso zonke izinto zesaziso seapps yakho yemidiya ukuze uqaphele - ukusuka kwisihloko ukuya kwisandi esibonisa ukuhanjiswa komyalezo.
Izinto zesaziso sokutyhala ezinokuthi zibe zezakho
Yongeza ukubamba ngokweemvakalelo nge-emojis (xa kufanelekile) kwaye wenze ukubakho okunikezelwayo ngokuqala ngegama lomsebenzisi. Ngomxholo onamandla onjalo, izaziso zakho zokutyhala zinokufumana ukonyusa nge-15-40% kwii-CTRs.
Imizekelo yokutyhala okwenzelwe wena ukuba usetyenziso lweendaba lunokuthumela
Inyaniso 5: Ixesha lokuTsala ixesha
Ngokwezibalo esizihlanganisileyo ePushwoosh, ezona CTRs ziphakamileyo zenzeka ngolwe-Lwesibini, phakathi kwe-6 kunye ne-8 pm ixesha labasebenzisi. Ingxaki kukuba, akunakwenzeka ukuba ii -apps zemidiya zicwangcise zonke izaziso zazo ngeli xesha lichanekileyo. Amaxesha amaninzi, abahleli abanakho ukucwangcisa izilumkiso zabo kwangaphambi kwako konke-kufuneka bazise iindaba kwakwenzeka.
Into enokwenziwa nayiphi na imithombo yeendaba, nangona kunjalo, kukufumana ixesha apho abasebenzisi bayo banomdla wokucofa kwizaziso kwaye bazame ukuhambisa izimvo kunye nokufunda okude emva koko. Iingcebiso ezimbalwa zokuphumelela:
Cinga ixesha lendawo yabafundi bakho
Cwangcisa iiyure zokuthula ngokufanelekileyo
Amaxesha abekiweyo ovavanyo lwe-A / B kunye neefomathi zisiwe
Buza abaphulaphuli bakho ngokuthe ngqo- njenge-SmartNews app eyamkela abasebenzisi abatsha ngobhaliso olukhawulezileyo babuza ukuba bakhetha nini ukutyhala
Le yindlela iapps yemidiya enokusombulula ngayo ingxaki ngezaziso ezingalindelekanga nezingacacanga, ukunciphisa ukuphuma nokuphucula ukuzibandakanya komsebenzisi.
Inqaku 6: Rhoqo Isaziso sokutyhala
Okukhona kutyhala usetyenziso lweendaba, ii-CTRs ezisezantsi abazifumanayo-kwaye ngokuchaseneyo: uyakholelwa ukuba le ngxelo iyinyani?
Uphononongo lwedatha ye-Pushwoosh ityhile ukuba ukusasazeka kwesaziso se-push kunye ne-CTR akuxhomekekanga komnye-endaweni yoko, kukho unxibelelwano olunokubakho phakathi kweemetrikhi ezimbini.
Ubuqhetseba kukuba, aba bapapashi abancinci ukuthumela ezona zincinci ngemini- kwiimeko ezininzi, abanakho ukufumana ii-CTRs eziphezulu kuba bengakhange bafumane ukuqonda okwaneleyo kukhetho lwabaphulaphuli babo. Abapapashi abakhulu, ngokuchaseneyo, bahlala bethumela ngeenxa zonke izaziso ezingama-30 ngosuku-kwaye ngoku, hlala ulungile kwaye uzibandakanya.
Ngokucacileyo, imiba yokuhamba rhoqo, kodwa kuya kufuneka ulinge ukumisela inani elifanelekileyo lemihla ngemihla yokutyhala akho usetyenziso lweendaba.
Inqaku le-7: i-iOS vs Iqonga le-Android
Ngaba uqaphele ukuba ii-CTRs ziphezulu kangakanani kwi-Android kune-iOS? Oku ikakhulu kungenxa yomahluko phakathi kweqonga le-UX.
Kwi-Android, ukutyhala kubonakala ngakumbi kumsebenzisi: bahlala bencamathele encotsheni kwesikrini, kwaye umsebenzisi uyababona ngalo lonke ixesha bethoba itrowa yesaziso.
Ukutyhala kwe-iOS kubonakala kuphela kwiscreen sokukhiya- xa isixhobo sivuliwe, ukutyhala kufihlwa kwiziko lezaziso. Kwaye izinto ezintsha zithintela izaziso kwi-iOS 15, ezininzi izilumkiso ziya kuba ngaphandle kokugxila kwabasebenzisi.
Qaphela ukuba inani yabafundi onokuthi ubandakanyeke nezaziso ezityhilayo kwi-iOS kunye ne-Android ziya kwahluka ngokwelizwe elinye ukuya kwelinye.
E-UK, ipesenti yabasebenzisi be-iOS yagqitha kwisabelo sabasebenzisi be-Android ngoSeptemba 2020, kwaye ngoku abaphulaphuli bamaqonga ahambayo ziphantse zalingana.
E-US, nangona kunjalo, Abasebenzisi be-iOS baninzi kunabanikazi bezixhobo ze-Android ngozinzo lwe-17%.
Oku kuthetha ukuba ngamanani apheleleyo, usetyenziso lweendaba lunokufumana abasebenzisi abaninzi be-iOS abasebenza e-US kunase-UK. Gcina oku engqondweni xa uthelekisa iindlela zakho zokuzibandakanya kumazwe ahlukeneyo okanye umlinganiso.
Inqaku le-8: Ukufunyanwa ngokuThengiswa kweeTweaks
Idatha yePushwoosh ibonisa ukuba i-CTRs incopho xa usetyenziso lweendaba lune-10-50K kwaye emva koko ababhalisile abangama-100-500K.
Ekuqaleni, ukubandakanyeka kokungena komsebenzisi xa iphephandaba lifumene ababhalisile abangama-50K bokuqala. Ukuba usetyenziso lweendaba luyaqhubeka ukugxila kulwandiso lwabaphulaphuli, ii-CTRs ziyehla ngokwendalo.
Nangona kunjalo, ukuba umvakalisi ubeka phambili ukubandakanyeka komsebenzisi ngaphezulu kokufunyanwa komsebenzisi, banokuphinda benze i-CTR yabo ephezulu. Ngexesha lokusebenza kweendaba kuqokelela ababhalisile abangama-100K, ihlala iqhuba uluhlu lweemvavanyo ze-A / B kwaye yafunda kakuhle ukuthanda kwabo. Umshicileli ngoku unokusebenzisa ukwahlulwa kokuziphatha ukwandisa ukubaluleka kwezaziso ezisasaziweyo kunye nexabiso labo lokuzibandakanya.
Zeziphi iindlela zoLwazi lokuTsala eziya kugcina abafundi bakho beBandakanyeka?
Unoluhlu lwezinto ezikhuthaze ukubandakanyeka komsebenzisi kunye nezaziso zemithombo yeendaba ezingama-104. Zeziphi iindlela eziya kungqineka zisebenza kakhulu kuwe? Uvavanyo kunye novavanyo lwe-A / B luya kuxela.
Sekela isicwangciso-qhinga sakho kwisahlulo nakwimigaqo-nkqubo ebhaliweyo. Qaphela ukuba loluphi uhlobo lomxholo olubandakanya abafundi bakho kakhulu. Ekupheleni kosuku, iziseko zobuntatheli zisebenza kwintengiso yeapps nayo - konke malunga nokuhambisa ulwazi olufanelekileyo kubaphulaphuli abafanelekileyo kunye nokuzigcina bezibandakanya.
I-Pushwoosh liqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo elivumela ukuthumela izaziso zokutyhala (iselfowuni kunye nesikhangeli), imiyalezo yangaphakathi nohlelo, ii-imeyile, kunye nokunxibelelana ngemisitho emininzi. Nge-Pushwoosh, ngaphezulu kwama-80,000 amashishini kwihlabathi liphela anyuse ukubandakanyeka kwabo kubathengi, ukugcinwa, kunye nexabiso lokuphila.
Fumana iDemo yePushwoosh
tags: Androidimiyalezo yangaphakathi nohleloiOSIOS vs Androidusetyenziso lweselulaUkuzibandakanya kwesoftwareImiyalezo yefowuni yeselfowuniusetyenziso lweselfowuni lokutyhala izazisoIsaziso sokutyhalaIsaziso sokutyhala ctrImeko yesaziso sokutyhalatyhala isaziso rhoqoIsaziso sokungena kwiirhafu zokungenaUkuchukumisa ukwenziwa kwesazisoUkucwangciswa kwesaziso sokutyhalaisahlulo sesaziso sokutyhalatyhala ngesantya sesazisotyhala amanani ezazisoixesha lesaziso sokutyhalaPushwoosh